मिल्तीखोला हाइड्रोपावर बनाउन कोरियामा नेपालीबाट उठाइएको ११ करोड खाेई ? – Kantipur Press
मिल्तीखोला हाइड्रोपावर बनाउन कोरियामा नेपालीबाट उठाइएको ११ करोड खाेई ?
”मेरा सपनाहरू नभएका होइनन्, केही थान हेटौंडाको सुरुङमार्गले पुरिदियो र केही थान सानो मिल्तीखोलाले बगाइदियो ।” कोरियामा रहेका उत्तम खाजुमले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको वाक्कांश हो यो । उनले उल्लेख गरेको सानो मिल्तीखोला रामेछापको फुलासी गाउँमा पर्छ ।
सुनसरीका उनी कहिल्यै रामेछापको फुलासी पुगेका छैनन् । सन् २०१५ मा सानो मिल्ती हाइड्रोपावर आयोजना बनाउन भन्दै चार लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । त्यही समयदेखि उनले मिल्तीखोला सुनेका हुन् । सन् २०१७ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर गरिएको लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो पोखेका छन् ।
उत्तमझैं बुटवलका रामकुमार केसीले पनि सो विद्युत् आयोजनामा ८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । रामकुमार र स्याङ्जाका कपिलदेव न्यौपाने एउटै कम्पनीमा काम गर्थे । दु:ख सुखका कुरा हुन्थे । कोरियामा कमाएको पैसा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने सपना रामकुमारले सुनाएपछि कपिलले पनि लगानी गरे ।
कोरियामै रहेका इन्जिनियर तेन्जी शेर्पा, सुरेश लिम्बू, देवेन्द्र सम्बाहाङ्फे सहितको टोलीले मिल्तीखोलामा लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएका थिए । उनीहरुले कोरियाको विभिन्न ठाउँमा विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेबारे भेला गरे । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरियामा रहेका झन्डै ३ सय ६३ जना नेपालीबाट लगानीका लागि ११ करोड ४५ हजार रुपैयाँ उठ्यो । प्रतिव्यक्ति १ लाखदेखि १२ लाखसम्म लगानी उठाइएको थियो ।
विद्युतमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर कोरियामा रहेका नेपालीलाई आग्रह गर्नेमा इन्जिनियर शेर्पा अगाडि थिए । तत्कालीन समयमा उनै शेर्पा आयोजनाका संस्थापक अध्यक्ष थिए । उनले सन् २०१५ मा एउटा लगानी भेलामा बोलेको भिडिओ अझै पनि सुरक्षित छ । उनले भनेका थिए ”हाम्रो सानो मिल्ती खोला आयोजना साढे दुई वर्षमा बन्छ । त्यसपछिका दुई वर्षमा लगानी फिर्ता भई २५ वर्षसम्म निरन्तर फाइदा हुन्छ ।” पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेले प्रत्येक वर्ष ३ लाख २२ हजार रुपैयाँका दरले कमाउने उनले बताएका थिए ।
पैसा उठाउँदा भनिएका योजना जसरी काम भएको भए अहिलेसम्म लगानी गर्ने सेयरधनीको लागत उठिसक्ने थियो । तर सात वर्ष पहिले लगानी गरेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्‍यो भन्दै अहिले नेपालमा भएका लगानीकर्ताहरुले संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । ‘अहिलेसम्म ४ किलोमिटर कच्ची सडक खन्ने काम मात्रै भएको छ । हामीले लगानी के भयो भन्दा संचालक समितिमा बसेकाहरु एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्छन्’ संघर्ष समितिका संयोजक चेत बस्नेत भन्छन् , ‘कोरियामा काम गर्नेहरुको लगानीमा बन्ने कम्पनी भनेर हामी सबैले लगानी गरेको हो । हाम्रो लगानी गरेको पैसा के के गर्‍यो भन्दा उत्तर दिने मान्छे पनि छैन ।’
सानो मिल्तीखोला विद्युत् आयोजनाले सन् २०१३ मा विद्युत् विकास विभागबाट ३ मेगावाटमा उत्पादन गर्ने स्विकृति पाएको छ । पैंतालीस करोडको हाराहारीमा लगानी हुने भनिएको आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी कोरियामा काम गरिरहेका नेपालीको र ७० प्रतिशत लगानी बैंकको हुने भनिएको थियो । ‘काम हुँदै गएको भए कोरियामा रहेका अन्य नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्थे तर मिल्तीमा सुरुदेखि नै विस्वास गर्ने मान्छेहरु भएनन् जस्तो लाग्छ’ हाल ख्याङ्गीदोमा काम गरिरहेका अनिल कार्की भन्छन् । उनका अनुसार कोरियामा रहेका लगानीकर्तालाई आयोजनामा के कस्ता काम भए भनेर संचालक समितिले कहिल्यै भनेन । ‘नत साधारणसभा गरेर कम्पनीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिए’, आयोजनामा दुई लाख लगानी गरेका उनले भने ।
अहिलेसम्म मिल्तीखोला विद्युत् आयोजनामा १४ करोड खर्च भएको बताइएको छ । कोरियामा उठाएको ११ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ३ करोड । ‘हामीले दिएको पैसा संचालकहरुले कता कता खर्च गरे थाहा छैन । थप बैंकको पैसा पनि सकाएछन् । अहिले त बैंकको ब्याज नतिरेको पनि धेरै भयो रे ’ एक लगानीकर्ता रामजी श्रेष्ठले भने ।
सञ्चालकहरुकै बीचमा भएको विवादले काम अगाडि नबढेको मिल्तीखोला विद्युत् परियोजनाका तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष तेन्जी शेर्पा स्वीकार्छन् । ‘हामीले सुरुमा भनेअनुसारको काम गर्न नसकेको हो, टिम राम्रो बन्न सकेन,’ काठमाडौंमा रहेका उनले फोनमा भने, ‘साथीहरुले ०७४ सालमै मलाई हटाएका हुन् । त्यो समयसम्म केही काम भएका थिए । हामीले बैंकसँग लगानीका लागि सम्झौता गरेका थियौं । म कम्पनीमा नभएपछि के गरे केही थाहा भएन ।’
रोजगारका लागि कोरिया आएका नेपालीहरुबाट सबैभन्दा धेरै लगानी गरिएको मिल्तीको भविष्य के हुने अझै थाहा छैन । यसबाट सामुहिक रुपमा काम गर्न चाहनेहरुलाई नकरात्मक सन्देश गएको दक्षिण कोरियामा उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका इन्जिनियर कुसाङ शेर्पा बताउँछन् । ‘यो मिल्ती खोलाको काम भएको भए सामूहिक लगानीका अन्य काम हुन सक्थ्यो । कोरियामा ईपीएसमार्फत आएका नेपालीले मासिक कुल ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउँछन् । यसरी कमाएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भए देशलाई नै फाइदा हुन सक्थ्यो’ उनले भने ।आजको कान्तिपुर समाचारमा गोकुल थोकरले ले्नुभएको समाचार
कोरियामा अवैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिक हरुका लागी खुशीको खबर !
नेपालमा लगानीको सम्भावनाका विषयमा एनआरएनए काेरियाले अन्तरकृया कार्यक्रम गर्ने